Forexဆိုင်ရာ စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
ချစ်လှစွာသော ကုန်သည်များခင်ဗျား, မိတ်ဆွေတို့လေ့လာရန်အတွက် နားလည်လွယ်သော Forexသင်တန်းကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ်. သင်တန်းတွင် အဆင့်လေးခုပါဝင်ပါသည်: စတင်လေ့လာသူများအတွက် အခြေခံအဆင့်, အလယ်တန်းအဆင့်, Intermediate အဆင့်နှင့် ကျွမ်းကျင် အဆင့် ဆိုပြီးအဆင့်လေးဆင့်သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်. ဤသင်တန်းမှ သင်ခန်းစာပို့ချချက်များကို လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် သင်သည် Forexနယ်ပယ်တွင် စတင်လေ့လာသူအဆင့်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့်ထိတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမှာပင်ဖြစ်ပါသည်.
သင်ခန်းစာပို့ချချက်များအားလုံးကို သင့်Forexလေ့လာသင်ယူရေးတွင် အထောက်အကူကောင်းရစေမည့် ထိရောက်သောပို့ချချက်များဖြစ်စေရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ဤလေ့လာသင်ယူရန်ပညာပေးသင်ကြားပေးသည့် အစီအစဉ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်အသစ် အသစ်တွေကိုတင်ပေးနေမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မျက်ခြေမပျက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေပေးပါ!
Forexအကြောင်းကို FBSနှင့်အတူတကွလေ့လာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များနှင့် ပညာပေးသင်ကြားရေး အစီအစဉ်တွင်ရှိသော အခြားကဏ္ဍများကိုလဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသင့်ပါသည်။
ဤအဆင့်တွင် Forexဆိုတာဘာလဲ၊ ငွေကြေးဈေးနှုန်းဖော်ပြချက်တွေကို ဘယ်လို“ဖတ်”မလဲဆိုတာနှင့် FBSရဲ့အရောင်းအ၀ယ်ဆော့ဝဲလ်မှတဆင့် ငွေကြေးအတွဲတွေကို ဘယ်လို ၀ယ်/ရောင်းလုပ်သွားမလဲဆိုတာကို သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရှုံးအမြတ်ရလာဒ်အခြေအနေများကို ဘယ်လိုတွက်ချက်သွားမလဲဆိုတာ လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာပို့ချချက်များကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်အခြေအနေများကို စတင်သိရှိနားလည်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်.
ဤအဆင့်တွင် ငွေကြေးနှင့် ကုန်စည်များအတွက် သတင်းဖြစ်ရပ်အကြောင်းတရားများကိုအခြေခံ၍သုံးသပ်ခြင်း FAနှင့် ဈေးနှုန်းအတက်အကျပြသည့် အတုံးများ လမ်းကြောင်းများကိုအခြေခံ၍ TAနည်းဖြင့် နက်နက်နဲနဲသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းများကို နက်နက်နဲနဲလေ့လာသိရှိသွားမှာပဲဖြစ်သည်။ သင့်အနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန် သုံးသပ်ချက်နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကို သင်ယူလေ့လာသွားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဤအဆင့်တွင် ဈေးကွက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးအကြောင်း, ဈေးနှုန်းဦးတည်ရာလမ်းကြောင်း, ranges, နှင့်breakoutsတွေအကြောင်းကို သိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ဂျပန်စတိုင်candlesticksနှင့် chartပုံစံများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်သမားများ၏ စိတ်သဘောအခြေအနေများကို သိရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါသည်။
ဤအဆင့်တွင် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုriskတွေကိုဘယ်လို လျှော့ချစီမံသွားမလဲဆိုတာနှင့် အဆင့်မြင့်ဆန်းစစ်သုံးသပ်နည်းများနှင့် အဆင့်မြင့်အရောင်းအ၀ယ်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုတတ်စေရန် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ဤသင်ခန်းစာပို့ချချက်များကိုလေ့လာသင်ယူတတ်မြောက်သွားပါက သင့်ရဲ့အမြတ်ငွေတိုးပွားစေရန်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်ရန် အထောက်အပံ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်မည် ဖြစ်ပါသည်.